IBurma, indawo enhle futhi engasetshenziswa kabi yizokuvakasha | Ukuhamba kwe-Absolut
IBurma ise- ENingizimu-mpumalanga Asia, emngceleni, phakathi kwamanye amazwe ane China e India, imidondoshiya emibili yale ndawo. Noma kunjalo, Myanmar, njengoba kwaziwa futhi, akuyona encane, ngoba inamakhilomitha-skwele acishe abe yizinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa.
Ensimini ebanzi kangako, unezinto eziningi ozozibona. Kunamadolobha amakhulu njengenhloko-dolobha yakho, I-Yangon, kodwa futhi namadolobha amancane abonakala eme ngesikhathi. Ngokufanayo, kunjalo amathempeli amakhulu, kodwa futhi nge izindawo ezinhle nemizila yezintaba. Ngaphezu kwalokho, kuyizwe elinethonya elinamandla lamaBuddha elivulekele ezokuvakasha kungekudala. Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngeBurma, sikukhuthaza ukuthi uqhubeke ufunde.
1 Yini ongayibona eBurma
1.1 IRangoon, inhlokodolobha yangaphambili yezwe
1.2 INaipyidó, idolobha lesipoki
1.3 IBagan, idolobha lamathempeli eBurma
1.4 IMandalay, esinye isimangaliso saseBurma
1.5 Hsipaw, okunye ukuvakashelwa
1.6 Ihlathi laseKakku Stupa
1.7 Inle Lake, indawo yemilingo eBurma
1.8 INtaba iPopa nesigodlo sayo sezindela
1.9 Amabhishi aseNgapali, iBurma eyaziwa kancane
2 Kunini lapho ukuya ezweni lase-Asia
3 Ongakudla eBurma
4 Ungafika kanjani eBurma
Yini ongayibona eBurma
Ngokwalokho esisanda kukutshela kona, iMyanmar iyidayimane elisesimweni esibucayi ngokombono wezokuvakasha. Kamuva nje kusanda kujoyinwa i- izifunda e-Southeast Asia futhi izimangaliso zayo ezinkulu nezibabazekayo azikatholi izigidi zabantu ngonyaka. Kunoma ikuphi, sizokukhombisa okuhle kakhulu.
IRangoon, inhlokodolobha yangaphambili yezwe
Leli dolobha elinabantu abaningi abangaphezu kwezigidi ezinhlanu laliyinhloko-dolobha yaseBurma kuze kube ngu-2005 futhi liyaqhubeka nokuba yindawo yokungena ezweni. Kodwa-ke, akulona idolobha elihle ngokukhethekile, okungenani uma siliqhathanisa namanye.
Kunoma ikuphi, inezinto okufanele uzivakashele. Lokhu kunjalo ngesakhiwo senkolo se I-Shwedagon, lapho kuvela khona i-pagoda enegama elifanayo. Kuyisiphunga esimangalisayo (eBurma babizwa kanjalo payas) amamitha ayikhulu ukuphakama nokugeza ngegolide. Yize le nganekwane ilinika iminyaka engama-2500 XNUMX ubudala, ochwepheshe balibeka phakathi kwekhulu lesi-XNUMX nele-XNUMX lesikhathi sethu. Ngokombono wobuBuddha, yibo obubaluleke kakhulu ezweni, ngoba bunezinsalela zakhona Buddha.
Akuyona ukuphela kwe-stupa ongayibona eRangoon. Sikweluleka nokuthi uvakashele i- Sule pagoda, i-octagonal in shape nedome yegolide ngokulinganayo, noma Chaukhtatgyi pagoda, okuhlala umuntu omkhulu kakhulu kaBuddha, njengoba kwenzeka ku paya Ngahtatgyi.
INaipyidó, idolobha lesipoki
Ngenkathi kuyi inhlokodolobha yezokuphatha kusuka eBurma kusukela ngo-2005, asikufaki lapha njengesincomo, kodwa ngoba ilukuluku. Yenziwe ngobuciko endaweni esemaphandleni futhi kuthiwa ihlanganisa indawo ephindwe kasithupha kunaseNew York. Noma kunjalo, kunjalo inani elincane kakhulu labantu. Eqinisweni, inani lezakhamizi alaziwa, yize lilinganiselwa esigidini esisodwa, okungesona neze indawo enkulu kangako. Asikweluleki ukuthi uyivakashele, kepha uma wenza njalo, qiniseka ukubona isikhulu esikhulu seBuddhist se- Uppatasanti.
IBagan, idolobha lamathempeli eBurma
Kutholakala ethafeni elikhulu lezwe, osebeni lwe Umfula i-Irrawaddy, kumenyezelwe muva nje Amagugu Emhlaba ngamathempeli ayo amahle. Kuthiwa kunezinkulungwane ezine, kepha lezo okufanele uzivakashele yizo Ananda, kusukela ngekhulu le-XNUMX futhi wabizwa "I-Burmese Westminster Abbey" ngenxa yobukhosi bayo; sulamani, kusuka kuXII futhi okusho ukuhumusha kwayo kusho "Amagugu asemqhele"; UDhammayangyi, okungenakuphikwa ngombala wayo onsundu endaweni lapho acishe abe yigolide lonke khona, futhi Shwezigon, elizungezwe osomahlaya abane ngamunye wabo onesithombe sikaBuddha.
IMandalay, esinye isimangaliso saseBurma
Okunye ukuvakasha okubalulekile ohambweni lwakho lokuya eBurma yidolobha laseMandalay, ogama lalo eliyisikhuthazo liyisibonisi sakho konke ongakubona kulo. Ukuqala, duka emigwaqweni emincane yedolobha lakudala, eligcwele ukuphithizela nemigoqo.
Kepha ngaphezu kwakho konke, vakashela okuyigugu Isigodlo saseMandalay, lapho kwakuhlala khona inkosi yokugcina yezwe. Itholakala ngaphakathi kwenqaba futhi yakhiwa ngekhulu le-XNUMX. Siqukethe izakhiwo eziningana ezinophahla olugqagqene futhi, njenge-anecdote, sizokutshela ukuthi inani lazo elinokwakhiwa ngakunye likhombisa ukubaluleka kwalo.
Kumele futhi ubone eMandalay okumangazayo Ithempeli laseMahamuni, okuhlala kuyo uBuddha. Ukuqhubeka nezinganekwane nama-anecdotes, sizokutshela ukuthi kubhekwa njenge- ikhophi leqiniso kuphela lokho okukhona emhlabeni.
Ekugcineni, uma uzithola ukwazi ukukhuphuka izinyathelo zayo eziyi-1700, woza ku- IMandalay Hill, lapho uzothola khona ukubukwa okumangazayo kwedolobha.
Hsipaw, okunye ukuvakashelwa
Kususelwa eMandalay ukuthi ifayili le- Uhambo lwesitimela oluhle kakhulu eMyanmar, ifanele kuphela abavakashi. Ifinyelela edolobheni lase Lashio, kepha ivelela ubuhle bayo bendawo futhi, ngaphezu kwakho konke, i Gokteik viaduct, isakhiwo sensimbi esintekenteke cishe amamitha angamakhulu ayisikhombisa ukusuka ebusweni.
Isitimela naso siyama edolobheni lase Hsiphaw, ekunikeza ukuvakashelwa okunye eBurma ngaphandle kwamasekethe ezivakashi. Kuleli dolobha uzobona ukuthi injani impilo yansuku zonke yabakhileyo ezweni lase-Asia futhi ungavakashela ne-Little Bagan, i Isigodlo saseShan futhi i amaSulumane amaSulumane. Kepha ngaphezu kwakho konke, khuphukela kufayela le- Igquma lamaBuddha amahlanu, lapho uzokwazisa khona ukushona kwelanga okumangalisayo.
Ihlathi laseKakku Stupa
Njengoba ukwazi ukubona, yonke iBurma igcwele amathempeli nama-stupas. Kepha uma ufuna ukubona indawo eyingqayizivele ngempela ezweni lase-Asia, vakashela ihlathi le-stupa le- Kaku. Kuwukuhamba okukhulu okwenziwe ngama-clown amancane angama-2500, ngayinye enesimo sayo sikaBuddha, okuzokushiya umxhwele ngempela.
Inle Lake, indawo yemilingo eBurma
Kutholakala ku- shan izintaba Cishe ngamamitha angamakhulu ayisishiyagalolunye wobude, ukuhamba kuleli chibi kungumlingo. Okokuqala, kubukeka njengomfula, ubude bawo bungamakhilomitha ayikhulu ububanzi ngamahlanu kuphela. Kepha, ngaphezu kwalokho, emabhange ayo kukhona imizi engamakhulu amabili abakhileyo, i Inta (o "Amadodana echibi"), gcina yonke intelezi yendabuko yaseBurma.
INtaba iPopa nesigodlo sayo sezindela
Enye indawo esongwe imfihlakalo YiNtaba iPopa. Kwanele ukuthi umbone, enesizungu ethafeni, ukuze uqonde ukuthi sisho ukuthini. Ngaphezu kwalokho, phezulu kwayo kukhona okuhle Isigodlo se-taung kalat, okubonakala sengathi ibekwe lapho ngomlingo.
Ukuze ukhuphukele phezulu kufanele ukhuphuke izinyathelo ezingama-777. Kepha qaphela ngezinto oziphethe ngoba azipheli i-monos bagada isigodlo sezindela futhi bazobabamba ngokunganaki okuncane onakho.
Amabhishi aseNgapali, iBurma eyaziwa kancane
Ngokusobala, ezweni elilingana neBurma kwakudingeka kube namabhishi amahle ngokulinganayo. Endabeni yakho, basendaweni ye- Ngapali. Baqala ukuxhashazwa yizokuvakasha, kepha basagcina umoya othile wezintombi. Ukuzijabulela kuzokuvumela ukuthi uphumule ngemuva kokuvakashelwa okungaka.
Kunini lapho ukuya ezweni lase-Asia
IBurma inezinhlobo ezahlukene zezulu. Kepha, ngokuvamile, kubusa ENingizimu-mpumalanga ye-Asia. Okusho ukuthi, ungazitholela wena izinkathi ezimbili: okumanzi nokumile. Esokuqala, ngaphezu kokuba nemvula, yisikhathi semvula futhi sishisa ngokwanele ngakho-ke asikukhuthazi.
Kungcono ukuthi uvakashele izwe ngenkathi eyomile, ikakhulukazi phakathi kukaDisemba noMashi. Kodwa-ke, eyokuqala yalezi zinyanga iqondana nesikhathi sonyaka esiphakeme, lapho amanani abiza kakhulu. Ngazo zonke lezi zizathu, sikweluleka ukuthi uye eBurma phakathi kukaJanuwari noMashi.
Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokwazi izwe ngokunambitha i-gastronomy yalo. Okungenani ukuvakasha akuphelele uma ungazami. I-cuisine yaseBurma ithonywe kakhulu eyomakhelwane bayo China, India y I-Tailandia. Ngenxa yalokho, i- ilayisi Kuyisithako esiyisisekelo ezitsheni zabo futhi izinto zokusetshenziswa nazo zivelele njenge Inhlanzi Yasolwandle i-Andaman.
Ngokuqondene nabokuqala, balungiselela a irayisi elinobuthi noma yethulwe njengobunzima obumbene obuhlukahlukene nga che kuthathwa ukudla kwasekuseni. Ngokufanayo, ama-noodle o ama-noodle ziyisithako esibalulekile.
Mayelana nezitsha ezijwayelekile, i- amasobho, kubizwe hawu, yize kubizwa i-acidic chiyei. Ngokwengxenye yayo, ngaphi Yimidumba ebilisiwe edliwa nemifino nelayisi; i inyoka lephet isaladi leqabunga letiyi, elineklabishi namantongomane, kanye ne- hto-hpu wena Iqukethe ufulawa we-chickpea ongahlanganiswe nengulube noma inkukhu futhi uhlotshiswe ngama-paprika namakhambi anamakha.
Kepha isidlo sikazwelonke saseBurma sinjalo mohinga, amanye ama-noodle elayisi ahambisana nenhlanzi nomhluzi anyanisi. Ungathatha nezinye izithako ezifana nemifino, amaqanda abilisiwe, udali othosiwe kanye nomsele wamabhanana o-crispy.
Kepha ungazama futhi i-burmese curry, okuhambisana cishe nayo yonke into, yize ihlala inerayisi, imifino, amakhambi, i-tofu nesosi ngaphi ye. Ekugcineni, i- nan gyi thoke Ifaka ama-noodle amakhulu athosiwe nenkukhu, izinhlanzi ezisikiwe, iqanda elibilisiwe namahlumela kabhontshisi.
Ukuqedela ukudla kwakho okujwayelekile, unamaswidi eBurma. Eqinisweni, thatha itiye ngamakhekhe Kuyisiko phakathi kwabakhileyo ezweni. Okudume kakhulu yi intaba, uhlobo lwebhanisi elenziwe ngoshukela omisiwe nokakhukhunathi, kanye ne enyameni (sicabanga ukuthi intaba kusho okuthile okufana nekhekhe), angamakhekhe athambile futhi amnandi.
Kodwa-ke, uma ukhetha izithelo, unezinye ongeke uzibone eSpain. Isibonelo, yena i-durian. Kepha kufanele sikuxwayise ukuthi iphunga layo alithandeki neze. Empeleni kukhona abake bambiza "Isithelo esinuka kunabo bonke emhlabeni". Kodwa-ke, uma usuwunqobile lowomphumela, inyama yabo inokunambitheka okwehlukile.
Uma kukhulunywa ngeziphuzo, i- itiye ngokuhlukahluka kwalo okwehlukile kungokazwelonke. Kepha iBurma nayo idla okuningi ubhiya futhi ngisho ngenxa. Iningi lomdabu kule ndawo yi Tuba, isiphuzo esidakayo esitholakala entendeni kakhukhunathi.
Ungafika kanjani eBurma
Indlela engcono kakhulu yokungena ezweni lase-Asia ukusebenzisa i- Isikhumulo sezindiza saseYangon. Banayo futhi Mandalay y UNaipyidó, kodwa izindiza ezivela phesheya azivamile.
Uma ususeBurma, ukuhamba phakathi kwamadolobha, okuhle kakhulu yimigqa ye- ibhasi. Ungabathola ngazo zonke izinhlobo, kusukela ezimotweni zesimanje ezine-air conditioning kuya kumaveni amancane abagibeli abacishe babe ngamashumi amathathu. Futhi unethuba lokuthi ukuqasha imoto nomshayelikepha akushibhile. Futhi, enye indlela yokuhamba usebenzisa i- imikhumbi ehamba ngemifula yezwe.
Ekugcineni, ukuvakashela amadolobha amakhulu, nawe unayo amabhasi asedolobheni. Kepha okujwayelekile kakhulu orisho, ithandwa kakhulu kule ndawo yase-Asia. Okunye okwangempela yi Izimoto eziseceleni futhi i uben, enamasondo amathathu futhi efana ne- u-tuk-tuk de I-Tailandia. Kodwa-ke, izindlela ezithandwayo zokuthuthwa kwabantu basemadolobheni yilezi ibhayisikili. Kuwo wonke amadolobha amakhulu uzothola amaphuzu wokuqasha kubo.
Sengiphetha, iBurma yizwe elihle elingakaxhashazwa kakhulu ngabaqhubi bezokuvakasha abakhulu. Noma kunjalo, lokhu sekuvele kuyashintsha ngoba kuyakunikeza amathempeli amahle y imvelo ejabulisayo nebabazekayo. Ngabe unesibindi sokwazi izwe lase-Asia?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » eBurma
Yini ongayibona eziQhingini zaseCanary